ဘက်ပေါင်းစုံလျှပ်စစ် ICU အိပ်ရာ
ခုနစ်ခု Function ICU အိပ်ရာ
ငါးခု Function ICU အိပ်ရာ
ဘက်စုံသုံး Eletric အိပ်ရာ
သုံး Crank လက်စွဲစာအုပ်အိပ်ရာ
နှစျခု crank လက်စွဲစာအုပ်အိပ်ရာ
သုံး crank လက်စွဲစာအုပ်
[ကူးပါ] ဇိမ်ခံကလေးငယ်ကုတင် (trendelenburg နှင့်နောက်လမ်းကြောင်း ၁၂ လိုင်းနှင့်အတူ)
ဇိမ်ခံသောကလေးငယ်အိပ်ရာ (trendelenburg နှင့်ပြောင်းပြန် trendelenburg ၁၂ ဒီဂရီပါ ၀ င်သော) B-46 အရွယ်အစား - ၈၇၀ × ၅၃၀ × ၉၂၀ - ၁၀၇၀ မီလီမီတာအဓိကအင်္ဂါရပ် - ၁။ ကြည်လင်ပြတ်သားသောပလတ်စတစ်အဖုံးများကိုလေ့လာသူအတွက်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ရန်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နွေ ဦး၊ 0-12 ဒီဂရီညှိနိုင်သည်။ ဓာတ်ငွေ့နွေ ဦး၊ 920-1070mm ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ 3. 100mm DIA ။ ဆန့်ကျင်ဘက်ထောင့်တွင်ဘရိတ်နှင့်အတူ Polyurethane တစ်ဘီး casters, ချောမွေ့လှည့် caster အသံတိတ် transportaion ပါလိမ့်မယ်။ ရွေးချယ်စရာများအတွက် 4. ပန်းရောင်နှင့်အပြာအရောင်။
သံမဏိမွေးကင်းစကလေးငယ် B-39 အရွယ်အစား: ၈၁၀mm (L) * 460mm (W) * 960mm (H) အဓိကအင်္ဂါရပ် - ၁ ။ သံမဏိဘောင် ၂ ။
သံမဏိမွေးကင်းစကလေးအိပ်ရာ (Tiltable) B-36
သံမဏိမွေးကင်းစကလေးကုတင် (Tiltable) B-36 အရွယ်အစား: 825mm (L) * 550mm (W) * 940mm (H) အဓိကအင်္ဂါရပ် - ၁။ သံမဏိကိုယ်ထည်၊ ABS ပလပ်စတစ်အင်တုံ ၂ လုံးနှင့်ပစ္စည်းအတွက်ဘောင်ပါ ၀ င်သည်။ စက်ဘီးဖြင့်ချိန်ညှိ 3.Inclination ထောင့်, ဘရိတ်နှင့်အတူ) 0-12 °
Epoxy သည် Semi-fowler ကလေးအိပ်ရာ B-35-2 ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်
B-35-2 အရွယ်အစား - ၁၆၅၀ မီလီမီတာ (L) * 825mm (W) * 630 / 1285mm (H) အဓိကအင်္ဂါရပ် - 1.epoxy ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအိပ်ရာပလက်ဖောင်း၊ လူမီနီယံအလွိုင်းဘေးထွက်အစောင့်များ၊ 2. ကျောအနားယူ function ကို0~ 45 °, crank ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည့်; ၃။ ချိန်ညှိနိုင်သောအမြင့်နှင့်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းနှစ်ဖက်ကိုယ်ရံတော်ရထားများ ၄။ ကုန်ပစ္စည်းများချွေတာနိုင်သောခေါက်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
အိပ်ယာစားပွဲ F-32 ကျော်ရွှေ့ပြောင်း
F-32 အိပ်ရာစားပွဲပေါ်မှရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော F-32 အရွယ်အစား: L795 * W400 * H700 ~ 960mm အဓိကအင်္ဂါရပ် - ၁။ သစ်သားအပေါ်ဘုတ်ဖြင့် epoxy ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိဘောင် ၂။ အမြင့် ၇၀၀ မှ ၉၆၀ မီလီမီတာမှ ၃ အထိအထိသဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်။ dia.50mm castors ပါ ၀ င်ပြီး ၄ ခုမှာဘရိတ်နှင့်အတူ ၄ ။
Multi-function ကိုသားဖွားအိပ်ရာ B-45
B-45 ဘက်စုံသုံးသားဖွားကုတင်အရွယ်အစား - ၁၈၀၀ (L) × 600 (W) × 650/895 (H) မီလီမီတာဘက်စုံသုံးသားဖွားဇယားသည်မွေးဖွားခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနှင့်မီးယပ်ဆိုင်ရာရောဂါစစ်ဆေးခြင်းအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှု၊ စီးပွားရေး၊ လုံခြုံမှုနှင့်စိတ်ချရမှုတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ အိပ်ရာမျက်နှာပြင်၊ bedstead နှင့် bed base တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အိပ်ရာမျက်နှာပြင်တွင်နောက်ကျောအပိုင်း၊ ထိုင်ခုံအပိုင်းနှင့်ခြေထောက်အပိုင်းပါရှိသည်။ နောက်ကျောအပိုင်း၏အပေါ်အောက်သို့ရွေ့လျားမှုနှင့်အိပ်ရာမျက်နှာပြင်၏ရှေ့နှင့်နောက်သို့စောင်းကိုလည်ပတ်နေသောဘီးကထိန်းချုပ်ထားသည်။
Epoxy ဖုံးအုပ်သားဖွားအိပ်ရာ B-43-1
အရွယ်အစား: 1680mm (L) * 620mm (W) * 800mm (H) အဓိကအင်္ဂါရပ်များ: 1. epoxy coated frame, အရည်အသွေးမြင့်မားသော polyurethane မွေ့ယာ; အပိုင်း (၃) ပိုင်း၊ နောက်ကျောအနားယူခြင်း (ဓာတ်ငွေ့ဖြင့်ချိန်ညှိ)၊ ဒူးထောက်ခြင်း (ဂီယာစက်ပြင်စနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်)၊ ၃။ ခြေထောက်ခြေနင်းပါသောခြေထောက်နှင့်ဆူညံမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သောရာဘာဖြင့်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းထောက်ပ့်သည့်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းပါသောခြေစွပ်ပါ။ ၅ ။
အရွယ်အစား: 1680mm (L) * 600mm (W) * 800mm (H) အဓိကအင်္ဂါရပ်: 1. သံမဏိဘောင်, အရည်အသွေးမြင့်မားသော polyurethane မွေ့ယာ; ၂။ အပိုင်းသုံးပိုင်း၊ နောက်ကျောအနားယူခြင်း (သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြင့်ချိန်ကိုက်)၊ ဒူးထောက်ခြင်း (ဂီယာစက်ပြင်စနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်)၊ ၃။ ခြေထောက်ခြေနင်းပါသောခြေထောက်နှင့်ဆူညံမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သောရာဘာဖြင့်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းထောက်ပ့်သည့်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းပါသောခြေစွပ်ပါ။ ၅ ။
သံမဏိညစ်ညမ်းသော tub trolley F-30 အရွယ်အစား - ၂၉၀ မီလီမီတာ ()) * ၄၂၀ မီလီမီတာ (ဟ) အဓိကအင်္ဂါရပ် - ၁။ ထိပ်ရှိပလတ်စတစ်စည်နှင့်အတူသံမဏိကိုယ်ထည်၊ dia.100mm swivel castors ပါ ၀ င်သော 2. အခြေနေ ၃ ။ ဒီပြောင်းလဲမှုကြောင့်စျေးနှုန်းများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ။
M-4 အတွက်သံမဏိ IV လှံတံ
သံမဏိ IV လှံတံ M-4 ၏အဓိကအင်္ဂါရပ် - ၁။ သံမဏိတယ်လီစကုပ်ပြွန် ၂။ ထိပ်ဆုံးမှာခရုမ်းချိတ်လေးခုပါရှိသည်
IV ရပ်တည်ချက် (အမျိုးအစား C)
IV stand (type C) ၏အဓိကအင်္ဂါရပ် - ၁။ သံမဏိပတ် ၀ န်းကျင်ပြွန်နှင့် ABS ပလတ်စတစ်အောက်ခံ၊ 2. အမြင့် 135cm ကနေ 240cm မှချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်; Chrome ချိတ် (၄) ခု၊ ABS ပလတ်စတစ်အောက်ခံပြားနှင့်အတူထိပ်တန်း
ကုလားထိုင် F-44-2 လိုက်ပါသွား
အရွယ်အစား: L1900 * W530 * H240 / 400mm အဓိကအင်္ဂါရပ် - ၁။ epoxy coated သံမဏိကိုယ်ထည်၊ အရည်အသွေးမြင့်ရေမြှုပ်ကောင်နှင့်အသားရေအဖုံး ၂။ အောက်ခံဘောင်များနှင့် ၃။ ဒီပစ္စည်းကိုကုလားထိုင်နှင့်အိပ်ရာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၁၂၃၄၅ နောက်> >> စာမျက်နှာ ၁ / ၅
Dongshiduan မြို့ Xushui ကောင်တီ Hebei ပြည်နယ်တရုတ်
Hebei Pukang Medical Instruments Co. , Ltd.
ICU ကုတင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအသုတ် ... o